Gökçek wuxuu la kulmay wakiilo taksi taagan | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Central Anatolia06 AnkaraGokcek, ayaa la kulmay wakiilada taksiyada
09 / 10 / 2017 06 Ankara, tareenka, GUUD, Nidaamyada Tire Wheels, TURKEY
Duqa Magaalada Ankara ee Magaaladda Melih Gokcek, ayaa la kulmay wakiilo ka socda joogsiyada tagaasida. Duqa Magaalada Gökçek wuxuu yiri, süresince Intii lagu gudajiray sanadkeyga aniga oo ah duqa 23,5, waxaan kugu taageernay adigoo aanan qaadin taksi dheeri ah 7 bin 700 tagsi ee Ankara ”.
Kulankii lagu qabtay Hoolka Shirarka ee Dowlada Hoose ee Magaalada, Madaxweynaha Gökçek, iyo sidoo kale Madaxweynaha Ankara Rugta Ganacsatada iyo Kireystayaasha (ANKESOB) Madaxweyne Mehmet Yiğiner, Kuxigeenka Duqa Magaalada Ali İhsan Ölmez, Maareeyaha Guud ee EGO Balamir Gündoğdu, Waaxda Gaadiidka Mümtaz Durlanı, Madaxweyne Abdirraxmaan Karabudak iyo wakiilo tagsi ayaa kaqaybqaatay xirfadihii 300'un.
Wadayaasha tagaasida waxay soo dhoweeyeen Madaxweyne Gökçek iyagoo sacab iyo dhacey albaabka hoolka, iyagoo leh "Ankara wey kugu faaneysaa".
“ANIGU MAANTA HALKANNAANNAANNAAN NABADGELYADA Wanaagsan SHAQAALAHA İC
Duqa magaalada Ankara tan iyo maalintii darawalka tagaasida, minibus, ELV iyo basaska dadweynaha ayaa had iyo jeer muujinaya xiriir wanaagsan Madaxweynaha Gokcek, "Markii ay dhibaatadu meesha ka baxday, dhibaatadan had iyo goor waa idin dhex jirtay," ayuu yidhi.
Mararka qaarkooda, Madaxweyne Gökçek wuxuu caddeeyay in wixii ka dhacay koox koox ganacsato ah in laga hormariyay kooxdii kale wuxuuna yiri, sonra Markaa waxaad bilaabeysaa inaad cabato. Kaalay, naftaada saar meeshayda. Waxaan u sheegnay in taasi tahay xallin; 'Heshiis dhexmara naftaada, saxeex saxiixaaga, kaalay oo aan annagu dhammaystirno' ... Qaabkaan, waxaad ku heshiiseen 3-5 jeer, annagaba waan fulinay, ayuu yiri konu.
AZ KHATARAHA QOYSKA OO LAGU SAMEEYAA BOODAHA, MADAXBANAANIN CUDURADA ”
Khudbaddiisa, Madaxweyne Gökçek wuxuu carrabka ku adkeeyay in awoodda lagu go'aaminayo darajada taksiga ay ku jirto dowladda hoose ee sharciga iyo in goobahan ay go'aamiso hay'adda UK.
“Si wanaagsan ugama aysan wada shaqeyn maamulkii hore. Waxaan baranay inay iibiyeen meelaha qaar sidii taxi istaago ahaan, marka laga reebo go'aaminta degmadu iyaga kaligeed gaadhay. 60-65 waxa lagu iibiyay kun rodol. Dhismooyinkee ayaad ka iibinaysaa yaad u iibinaysaa? Waxaan haynaa dukumentiyo tan ah. Waxaan siinay DA. Kuma yaa kuu imaan kara 'oo ka iman doona Dawladda Hoose ayaan wax ka qaban doonnaa tan' ayaa leh, fahamso inay tahay been abuur. Si toos ah noo soo wac oo aan helno. Qof kaa dambeeya wuxuu jeebkaaga ku helayaa lacag aan caddaalad ahayn. Yaanay noqon kuwa kugu khiyaaneeya.
MAGAALADA HOSPITAL iyo ANKAPARK TAXI
Wadayaasha tagaasida, dhismaha hada socda ee Isbitaalka Magaalada Bilkent iyo ANKAPARK'ın waxay cadeeyeen in joogsiga tagaasida ay suuq geynayaan dadkan Madaxweyne Gökçek, ayaa soo saaray hadalada soo socda:
Ad Loogu talagalay qaybinta cadaalad ah ee joogsiga ee Isbitaalka Magaalada, waad oggolaatay heshiiska oo aad bilowdaa qandaraaska. Sidan ayaa loo sameeyaa. ANKAPARK waxay leedahay xaalad aad u kala duwan. Waxaan halkaan u daneyneynaa shirkad caalami ah. Shirkadan, oo ay kujirto baarkinka gawaarida waxay u shaqeyn doontaa sidii gudaha oo dhameystiran. Haddii aad rabto halkan joogsi, shirkadan waxay u baahan tahay in la fahmo. Tani waa arrin adduunka oo dhan ka jirta. ”
XAQIIQOOYINKA: "WAA KUGU SAMEYNAYNAA"
Hadalka, dukaanleyda tagaasida inta badan "Waxaan kugu kalsoonahay" halkudhigyada waxaana lagu salaamayaa Duqa Magaalada Gökçek, maaddaama ay Magaaladda Caasimadda u qeybiyeen xarun tagsi oo loo yaqaan '430', waxay yiraahdeen waxay cusbooneysiiyeen 220.
Duqa Magaalada Gökçek wuxuu xasuusiyay inaysan sameynin wax taksiile ah oo dheeri ah inta lagu gudajiro xafiiska duqa sanadlaha 23,5. Tani waa tiro aad u badan. Cabbirka tan adduunku waa taxi kun qof. Marka loo eego tirada dadkayaga, waxaan ubaahanahay inaan haysano 7 kun 700 tagaasida. Waxaan soo soconaynay 5 sanado. Taasi waa waxa aan adiga kugu sameyno ..
KHUDBADAHA ANKAPARK OO LAGU SAMEEYO DHAMMAAN
Duqa magaalada Gökçek wuxuu dhagaystay dhibaatooyinka darawalada tagaasida si wada jir ah marki uu khudbadiisi dhamaaday wuxuu dhamaan wadayaasha tagaasida ku casuumay ANKAPARK axadii asxaabtooda wuxuuna usii waday:
Waxaad kaliya arki kartaa ANKAPARK banaanka. Waad arki doontaa waxa aad ka aragto dibadda oo aad ku noolaan doonto. Beerta ugu weyn Yurub, waad arki doontaa. Waad arki doontaa waxa la sameeyo kadib markaad aragto. Waxaad tahay tilmaamaha lugta ee Ankara. Hadaad aragto. Waxaad si wanaagsan ugu sheegi kartaa Ankara waxa ay tahay saamiga. Taasi waa meesha 50 ay ka saarto kun qof. Soo qaado qofkii aad rabto. Dhamaantiin waan idin sugaya 2 axada. Waan imaan doonaa haddaan saami ku leeyahay. Dhamaanteenba waan ku wada wadnaa halkaas. ”
YİĞİNER: İZ WAA INAAD KU SAMEEYSA MADAXWEYNAHA MARKA LA SAMEE Y
Isaga oo ka hadlaya kulanka madaxwaynaha darawallada tagaasida ee Gökçek ANKESOB Mehmet Yiğiner, Duqa Magaalada Munisa Melih Gökçek ayaa khudbadiisa ku bilaabay isaga oo uga mahadcelinaya kulanka, 7 kun oo 700 tagsi ah oo kuyaal caasimada 20 kun oo shaqaale iyo qoysasku waxay sheegeen in ay yihiin beel balaadhan. Yiginer, taxiinka taksiyada, qaar istaag iyo dhibaatooyin khadadka, dalabaadka ayaa la muujiyay.
Ankara degmada Metropolitan, Golaha degmada oo ay ka saareen go'aan ka xidhmooyin ukome waa garabaka in darajo taxi degmada ugu horeeyey ee Turkey, "Ilaah ha idiin barakeeyo, Madaxweynaha. Madaxweynaheena ayaa naga caawiyay. Had iyo jeer wuu noo joogaa annaga. Waxaan jecelahay inaan u mahadceliyo Duqa Magaalaga aniga iyo anigoo ku hadlaya magacaaga ”.
Duqa magaalada Gökçek, khudbadaha kadib, dhamaan ganacsatada cabeeye ee kaqeybgalay kulanka, waxay sawirro ka qaateen kooxo.
Maamulaha guud ee shirkadda TÜVASAŞ Erol Inal ayaa la kulmay madaxda madaxa
Kulanka gobolka, 3. waxay isugu yimaadeen hal-abuurka buundada
Duqa magaalada Major Winxen ayaa la wadaagay tuuladiisii ​​Tradesmen Bridge
UTİKAD Wasiirka Gaadiidka Elvan
Xubnaha Golaha Wakiilada waxay ku kulmeen İzmir
Nidaamyada Tareenka ayaa yimid Samsun
Tirada Cusub ee Cusub Teleferikte Cusub